सुशान्त सिंह ‘राजपुत’ लाई फर्केर हेर्दा – Karnalisandesh
सुशान्त सिंह ‘राजपुत’ लाई फर्केर हेर्दा
प्रकाशित मितिः ३ असार २०७७, बुधबार ११:३० June 17, 2020
काठमाडौँ। आत्महत्या गरेर संसारमा रहेका आफ्ना शुभचिन्तकहरुलाई दुःखित बनाएका सुशान्त सिंह ‘राजपुत’ बलिउड चलचित्र जगतका महान युवा हस्ती थिए।
उनी २१ जनवरी १९८६ मा भारतको पटना नामक शहरमा जन्मिएका हुन्। स्व. माता उषा सिंह र पिता केके सिंहको कोखबाट जन्मिएका सुशान्त बाल्यकालदेखि नै याकटिङमा रुचि राख्ने गर्थे। उनका बुबा सरकारी जागिरे थिए।
नायक सिंह १६ वर्षको हुँदा ‘सन् २००२’ मा उनकी आमा उषाको दुःखद निधन भयो। उनको परिवारमा एक जना बहिनी र एक जना दाई छन्। उनकी बहिनी मिटु सिंह प्रान्तस्तरीय क्रिकेटर हुन्। बिडम्बना भन्नुपर्छ मुम्बइमा सुशान्तको अन्तिम संस्कार चलिरहेका बेला उनकी भाउजु सुधा देवीलेसमेत प्राण त्याग गरिन्। भारतीय मिडिया आजतकका अनुसार सुशान्तको मृत्युको खबर सुनेर बिहारको पूर्णियामा डिप्रेशनका कारण भाउजु सुधाको निधन भएको छ।
नायक सिंहले आफ्नो स्कुले जीवन पटना र कलेज जीवन दिल्लीको कुलाचीमा बिताएका थिए। उनले दिल्लीमै ‘दिल्ली कलेज अफ इन्जीनीयरिङ क्याम्पबाट डिग्री हासिल गरेका थिए।
भन्छिन् उनी पढाईमा मन लगाउदैन थिए। इन्जीनीयरिङ पढाइका क्रममा फेल पनि भएका थिए । पढाइकै क्रममा उनको डान्स र नाटकमा रुचि बढ्यो । पढाई छोड्ने फैसला गरेर कलाकारितामा होमिएका सिंहले पूरै समय डान्स र एक्टीङलाई दिए।
जब नायक सिंह दिल्ली टेकनोलोजीकल यूनीवर्सिटीमा पढ्थे उनले शियामक दावरका डान्स कलासमा भर्ना गरे। नायक सिंहका लागि उक्त डान्स क्लास नै वलिउड क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने राम्रो अवसर बन्यो।
डान्स कलास जोइन भएपछि सिंहले एक्टिंगमा आफ्नो करिएरको उचाइ देखे। साथै उनले जिम कलासमा पनि डान्स गर्थे। त्यसको केही महिनामै उनले चर्चित ‘दावर डान्स गु्रप’ मा सहभागि हुने मौका पाए।
सन् २००५ मा ५१ वटा फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह भएको थियो। त्यसमा बैंकग्राण्ड डान्सका ग्रुपमा सिंह पनि थिए । सन् २००६ मा कामनवेल्थ क्रीडा स्पर्धाको आयोजनामा उनी अस्ट्रेलिया गएका थिए।
सन् २०१० मा ‘जरा नचके दिखा २’ डान्स रियालिटी शोदेखि नै उनी सबैको नजरमा सम्भावित बलिउड क्षेत्रका अब्बल हिरोका रुपमा परेका थिए। ‘पवित्र रिश्ता’ नामक सिरियलमा उनले उक्त सम्भावनालाई सावित गरि दिए। त्यस्तै डिसेम्बर सन् २०१० मा ‘झलक दिखला जा ४’ डान्स रियालिटी शोमा कोरियोग्राफरको जिम्मा पाएका सिंहको दोस्रो फिल्म हो ‘शुद्ध देसी’ रोमान्स।
उक्त फिल्मको निर्देशन मनीष शर्माले गरेका थिए। सन् २०१४ मा रिलिज भएको फिल्म ‘पीके’ मा बलिउड क्षेत्रका सुपरस्टार आमिर खान र अनुष्का शर्मासँग काम गर्ने अवसर पाएका थिए। उक्त फिल्म निक्कै रुचाइएको थियो। कमाइका हिसाबमा पनि उक्त फिल्म सफल भयो।
सन् २०१७ मा दिनेश विजनको फिल्म ‘रावता’ आएको थियो। उक्त फिल्ममा उनकी प्रेमीका भनिएकी कृति सेनन्को साथमा देखिएका थिए।
अभिषेक कपुरको ‘काई पो चे’ नामक फिल्मिमा काम गर्ने अवसर पाएका उनले राजकुमार राव र अमित साधको सहयोग प्राप्त गरे। चेतना भगतका नावेल ३ मिस्टेक आँफ माया लाइफ आधिरित उक्त फिल्मले बक्स अफिसमा काफि कमाइ गरेको थियो।
नायक सिंहले जीवनको छोटो समयमै भारतीय वलिउड क्षेत्रका सर्वाधिक चर्चित पुरस्कार र सम्मानहरुबाट सम्मानित भएका थिए ।
फिल्म ‘काइ पो चे-२०१४’ बाट स्क्रीन अवार्ड तर्फ बेष्ट हिरोको रुपमा सम्मानित भएका थिए ।त्यस्तै सन् २०१६ को मे मा नीरज पाण्डेको भारती क्रिकेटर महेन्द्रसिंह ध्वनीको जीवनमा आधारित ‘एम एस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी’ मा काम गरे। उक्त फिल्ममा सिंहले आफूलाई क्रिकेटर धोनीको रुपमा बेजोड प्रस्तुत गरेका थिए।
सन् २०१६ मा सबैभन्दा धेरै कमाइ गरेको यहि फिल्मबाट उनले सन् २०१७ ‘फिल्मफेयर’ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जितेका थिए । यो सँगै उनले करिब डेढ दर्जन पुरस्कारहरु प्राप्त गर्न सफल भएका थिए।
सिंहका उत्कृष्ट तीन फिल्म
१. काइ पो चे २०१३- निर्देशक अभिषेक कपुर
‘काइ पो चेतन’ भगतको चर्चित उपन्यास ‘थ्री मिस्टेक्स’ अफ माइ लाइफुमा आधारित फिल्म हो। यसमा तीन जना साथीको मित्रता र प्यासनुको कथा देखाइएको छ।
२. एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी २०१६
महेन्द्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेटका सम्भवतः सर्वाधिक सफल र लोकप्रिय क्याप्टेन हुन्। आफ्नो नेतृत्वमा उनले क्रिकेटका सबै खाले ठूला प्रतियोगिता जितेर इतिहास रचेका छन्। एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी उनै सफल क्रिकेटरको जीवनका महत्वपूर्ण घटना समेटिएका छन्। धोनीको भूमिकामा सुशान्तको अभिनय छ।
२०११ मा श्रीलंकाविरुद्धको विश्वकप फाइनल खेलमा धोनीले युवराज सिंहलाई नपठाएर आफैं मैदानमा उत्रेका थिए। यो फिल्मको आरम्भ विश्वकप २०११ को त्यही सन्दर्भबाट हुन्छ। धोनीको खेल जीवन र निजी जीवनका कथालाई सँगसँगै देखाइएको यो फिल्मले त्यसपछि दर्शकलाई तीन दशकअघिको समयमा र्पुयाउँछ
३.छिछोरे ‘२०१९’ निर्देशक नितेश तिवारी
यो फिल्मको कथा अनिरुद्ध पाठकका छोरा गौरवबाट सुरू हुन्छ। कलेज टपर आमाबुबाका सन्तान गौरव इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्न मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन्। अभिभावक जस्तै टपर बन्ने सपना पालेका उनी सोचे जस्तो रिजल्ट नआएपछि आत्महत्याको प्रयास गर्छन।
यो घटनापछि बल्ल ‘छिछोरे’को मूल कथा सुरू हुन्छ। यो कथा फ्ल्यासब्याकमा देखाइएको छ। यो कथाले गौरवका बुवाआमा सुशान्तसिंह र श्रद्धा कपुर उनीहरूका साथीको जीवनका रमाइलो र संघर्षका पाटो समेटेको छ। यसमा धनी र गरिब विद्यार्थीबीचको वर्गभेद र प्रतिस्पर्धा पनि देख्न पाइन्छ।
सुशान्तले आत्महत्या गर्नुको कारण
भारतीय सञ्चारमाध्यम अनुसार डिप्रेशनको शिकार भएका उनी गत आइतबार आफ्नै फ्ल्याटमा मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्।
अन्तिमपटक जुन ३ मा उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम मार्फत आफ्नी आमाको फोटो सेयर गरेका थिए। जसमा उनले आफू र आफ्नी आमाको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट फोटो राख्दै केही हरफ लेखेका थिए।
अंग्रेजीमा उनले लेखेको हरफको सार यस्तो थियो। आँशुका थोपाहरूबाट वाष्पीकरण भइरहेको मुस्कानका लागि लालायित कहिल्यै अन्त नहुने सपनाहरू र एक क्षणभंगुर जीवन यी दुई बीच सम्झौता गर्दै।
उनले ३४ वषको कलिलो उमेरमा १४ जुन २०२० आईतबार संसारमा रहेको उनका दर्शकहरुलाई दुखित तुल्याउदै संसारबाट बिदा लिएका छन्।